Safal Khabar - नेकपाको आकस्मिक सचिवालय बैठक वालुवाटारमा बस्दै
नेकपाको आकस्मिक सचिवालय बैठक वालुवाटारमा बस्दै
सचिवालय सदस्यकै प्रश्न ' बजेटमा फेरि एमसिसि घुमाएर ल्याइएकै हो ? त्यसो हो भने बजेट फेल हुन्छ'
शनिबार, १७ जेठ २०७७, ०७ : ३२
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दैछ । अहिले विहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सचिवालय वैठक बोलाईएको छ । बजेट वक्तब्यको पारम्भिक रुपमा सकारात्मक भन्दै टिप्पणी गरेका नेकपा नेताहरु जब बजेटको रातो किताव हात लाग्यो, त्यसपछि फेरि एकपटक झस्किएका छन् ।
सोही कारण नेकपाले बजेट, संविधान संसोधन लगायतका विषयमा छलफल गर्न पार्टी सचिवालय वैठक बोलाएको हो ।
सरकारले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता पार्टीभित्र विवादमा रहेको र पार्टीले यस सम्वन्धमा औपचारिक कुनै निर्णय नलिईसकेको अवस्थामा गत २ जेठमा नीति तथा कार्यक्रममा घुमाउरो शैलीमा एमसिसिकै परियोजना अगाडी सारेको र अहिले बजेटमा पनि त्यसै परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि नेकपाभित्र यस विषयले फेरि विवाद निम्ताएको छ ।
एमसिसी परियोजनाबाटै प्राप्त हुने भनेर राखिएको रकमसहित बजेट सरकारले लयाएको छ । तर एमसिसिको नाम भने उल्लेख गरेको छैन । यसले सत्तारुढ दलमा विवाद बढेको हो । बजेटमा यस विषयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा नेताहरुले आवाज उठाईसकेका छन् ।
पार्टीभित्रै यस विषयमा विवाद बढेपछि हिजो साझ ७ बजे पार्टीका दुई अध्यक्ष केपि ओली र पुष्पकमल दाहालका वीचमा छलफल भएपछि अहिले विहान ९ बजेका लागि पार्टी वैठक बोलाउने निर्णय भएको हो । अहिलेको बजेट पारित भएमा अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौताले वैधानिकता पाउने आशंकापछि सचिवालय सदस्यको दबाबमा शनिबार बिहान आकस्मिक रूपमा सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, – ‘एमसिसी यथास्थितिमै मान्ने, पालन गर्ने वा अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रश्नै छैन । नीति तथा कार्यक्रममा भएको पनि प्रधानमन्त्रीले लागू हुँदैन भनेपछि मात्र हामीले मानेका थियौँ, तर फेरि बजेटमा उक्त विषय आएको छ । त्यसकारण अब हटाउनुको विकल्प छैन, हटाइएन भने बजेट फेल हुन्छ ।’
अमेरिकी सहयोग एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान बजेटमा समावेश भएको छ । संसद्बबाट एमसिसी सम्झौता पारित नहुँदै सरकारले अनुदान रकमलाई आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा समेटेको हो । बजेट किताबको अनुदान तथा ऋण सारांश अनुसूची १० मा एमसिसी अमेरिकाबाट पाँच अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानका रूपमा राखिएको छ ।
यसैलाई प्रश्न उठाउदै नेताहरुले अध्यक्ष प्रचण्डमाथी पार्टी बैठक बोलाउन दवाव बढाएपछि अहिले विहान सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो ।
#नेकपा #सचिवालय बैठक #एमसिसि
‘सचिवालय बैठक’ बोलाउन नेकपा शीर्ष नेताहरुको माग
वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले सार्वजनिक रुपमै आफुहरुले पार्टी बैठक...
नेकपा सचिवालय बैठक तय : के होला वामदेवको निर्णय ?
१४ फागुनको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई...
उपनिर्वाचनमा नेकपाले मुख्य दुई स्थान गुमाउदा काँग्रेसलाई फाईदा
कांग्रेसले भने उपनिर्वाचनबाट १३ स्थानमा जित हात...
नेकपाले उपनिर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवार घोषणा गर्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले मंसिर १४...